Gustavo Gomez waa gaashaan da’yar oo Milan usoo baxaya! – Gool FM
Gustavo Gomez waa gaashaan da’yar oo Milan usoo baxaya!
(Milano) 14 Jan 2017 – Laga yaabee inay ahayd arrin waqti uun sugaysay. Imaanshihii lama filaanka ahaa ee Gustavo Gomez ee kooxda Lanus oo ka dheesha horyaal gebi ahaanba ka duwan kuwa Yurub.
Kaddib 2 kulan oo ay 7 gool AC Milan ka dhaliyeen 2 kooxood oo kala ah Sassuolo iyo Napoli, wuxuu Gustavo bilaabay inuu muujiyo bandhigyo cajiib ah isagoo la dheeley kooxo fara badan oo ay ka mid tahay Inter Milan.
Gomez ayaa ujeedka loo keenay uu yahay inuu daafaca dhexe lamaane kula noqdo Alessio Romagnoli si ay u noqdaan laba laacib oo da’yar, balse waxaa laacibkan reer Paraguay si KMG ah dib ugu dhigaya Gabriel Paleta oo sanadkan laga yaabban yahay, balse ah laacib 30-ka gaarey.
Gomez oo 23-jir ah oo kulankii ugu dambeeyay ee ay Coppa Italia ku wajeheen Torino oo ah koox dhexaad dhib badan wuxuu bedeley Romagnoli oo hargabsanaa, balse waxay saxaafadda Talyaanigu isku raacday inuu Milan usoo baxay daafac kale oo adag da’na yar oo lagu lamaanin karo da’yarka reer Talyaani ee Romagnoli ama Paleta, taasoo cumqi u yeelaysa daafaca dhexe ee Rosonneri.
''Serie A waa iga yaabiyay mana moodi jirin sidan'' - Antonio Rüdiger
Gerard Pique oo seegaya kulanka kooxdiisa Barcelona ay maanta wajahayso Las Palmas ee La Liga